Uzuzu Raw Dutasteride (164656-23-9) hplc ma98% | AASraw suppliers
/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Dutasteride ntụ ntụ
Rating: SKU: 164656-23-9. Category: Mmekọahụ Mmebi Hormones
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram na usoro nhazi nke Dutasteride (164656-23-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Ihe na-eme Dutasteride bụ nke otu ọgwụ ndị a maara dịka ndị nchikota 5-alpha-reductase. A na-eji ya na-edozi mgbaàmà nke hyperplasia prostate benign (BPH) n'ime ndị ikom na-ebu prostates. BPH bụ mmepe nke na-emekarị na ụmụ nwoke mgbe afọ 50 dị. Dutasteride na-arụ ọrụ iji belata mmepụta nke dihydrotestosterone (DHT), hormone nke na-eme ka ụba nke prostate gland. Dutasteride raw ntụ ntụ na-egbochi mgbaàmà nke BPH site na mbenata size nke prostate.
Dutasteride ntụ ntụ video
Nkume Raw Dutasteride bụ isi ihe
aha: Ihe na-eme Dutasteride
Usoro Molecular: C27H30F6N2O2
Molekụla arọ: 528.53
agba: ọcha ka beige ntụ ntụ
Nkịtị Raw Dutasteride na-eme ka ịmalite inwe mmekọahụ
Nkume ihe omume Dutasteride, ntụ ntụ ntụ,
Raw Dutasteride ntụ ntụ Usage
Nkume Dutasteride na-egbochi ntọghata nke testosterone ka dihydrotestosterone (DHT) n'ime ahụ. DHT tinyere aka na mmepe nke hyperplasia prostatic (BPH). A na-eji ihe eji edozi ihe na-eme Dutasteride na-agwọ ọrịa hyperplasia nke prostatic benign (BPH) n'ime ndị nwere prostate buru ibu. Ihe ntụchi nke Dutasteride na-enyere aka ịmalite urinary flow and may also reduce your need for prostate operation later on.
A na - enye ụfọdụ ihe na - edozi ihe na - eme ka ọ bụrụ ọgwụ ọzọ a na - akpọ tamsulosin (Flomax).
Okenye na-emekarị okenye maka eriri afọ nke Benign:
0.5 mg okwu ọnụ otu ugboro n'ụbọchị
Jiri: Ọgwụgwọ nke hyperplasia prostate benign symptomatic (BPH) n'ime ndị nwere prostate gbasaa iji belata ohere nke nnukwu njigide urinary (AUR) na ịwa ahụ BPH.
Akpa Dutasteride na-abịa dị ka capsule iji were n'ọnụ. A na-ewerekarị ya otu ụbọchị ma ọ bụ na-enweghị nri. Were Dutasteride raw ntụ ntụ n'otu oge kwa ụbọchị. Soro ntuziaka ndị dị na akara aha gị na nlezianya, jụọ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike ịkọwa akụkụ ọ bụla ị na-aghọtaghị. Were Dutasteride raw ntụ ntụ kpọmkwem dị ka a gwara. Ejila ihe ma ọ bụ na-erughị ya ma ọ bụ buru ya karịa oge dọkịta gị nyere iwu.
Kpochapụ capsules niile; emeghela ya, ma ọ bụ kpochapụ ha.
Mgbaàmà gị nwere ike ịbawanye mma mgbe ịchọtara ntụpọ Dutasteride maka ọnwa 3, ma ọ nwere ike iburu ọnwa 6 ma ọ bụ karịa ka ị hụ uru zuru ezu nke Dutasteride raw ntụ. Gwa dọkịta gị banyere otú ị na-enwe mgbe ị na-agwọ gị.
Akpa Dutasteride nwere ike ijikwa akara gị ma ọ gaghị agwọ ọrịa gị. Nọgide na-ewere Dutachide raw ntụ ntụ ma ọ bụrụ na ọ dị gị mma. Akwụsịla ị na-eji mkpocha Duthalaide n'ekwughị dọkịta gị.
Jụọ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta maka otu ihe onye emepụtara maka onye ọrịa ahụ.
Ịdọ aka ná ntị na ntụ ntụ nke Raw Dutasteride
E kwesịghị iji nwanyị ma ọ bụ nwatakịrị wepụ ihe na-eme Dutasteride. Akpanye ihe na-ekpuchi ihe a na-etinye n'ime anụ ahụ, na ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụaka ekwesịghị ikwe ka ha mee ihe dị na Dutasteride raw capsules.
Ọ bụ ezie na ụmụ nwanyị anaghị emepụta ihe na-adịghị mkpa na Dutasteride, ọgwụ a nwere ike ime ka ọ bụrụ nwa nwanyị ma ọ bụrụ na a na-ekpughe ya mgbe ọ dị ime. E kwesịghị ilebara capsules ntụ ntụ na-edozi ahụ anya site na nwanyị nke dị ime ma ọ bụ onye nwere ike ime ime.
Ejila, kpoo, ma ọ bụ meghee capsule ngwa ngwa nke Dutasteride. Gbanyụọ capsule dum. Ihe ntụchi nke Dutasteride nwere ike ime ka egbugbere ọnụ, ọnụ, ma ọ bụ akpịrị kpasuo ya iwe ma ọ bụrụ na agbajiri capsule ma ọ bụ meghere tupu ị ilo ya.
Ọ bụrụ na nwanyị na-abịa na ọgwụ a na mberede ka ọ ghara ịbanye na ya, jiri ncha na mmiri sachaa ebe ahụ ozugbo.
Tupu iwere Dutasteride raw ntụ ntụ, gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ihe nfụkasị na ọgwụ a, maọbụ na ọgwụ a na-akpọ finasteride (Propecia, Proscar).
Iji ntụ ntụ nke Dutasteride nwere ike ime ka ị nwee ike ịmalite ịrịa kansa cancer. Dọkịta gị ga-eme nyocha iji jide n'aka na ị nweghị ọnọdụ ndị ọzọ ga-egbochi gị iji Dutseide kpuchie ntụ ntụ.
Ejila ọbara nye ọbara mgbe ị na-ewere ihe dịka Dutachide na ọ dịkarịa ala ọnwa 6 mgbe ọgwụgwọ gị gasịrị. A na-ebute ihe na-eme Dutasteride raw ntụ na ọbara ma nwee ike ibute ọrịa nwa ma ọ bụrụ na ndị inyom dị ime na-enweta mmịnye ọbara na-enwe ihe ntụpọ Dutasteride.
Ihe nkedo Dutasteride bụ 4-azasteroid nke ihe ntanetị bụ onye na-ahọpụta onye na-ahọpụta ụdị 1 na ụdị 2 nke nje 5 alpha-reductase nke na-agwọ ọrịa hyperplasia prostatic (BPH) na ụmụ nwoke nwere prostate. Dutasteride raw ntụ ntụ na-enyere aka melite urinary na pụkwara belata mkpa maka ịwa ahụ prostate mgbe e mesịrị. A na - enye ụfọdụ ihe na - edozi ihe na - eme ka ọ bụrụ ọgwụ ọzọ a na - akpọ tamsulosin (Flomax). Dutasteride raw ntụ ntụ na-egbochi ntụgharị nke testosterone ka dihydrotestosterone (DHT) n'ime ahụ. Okpokoro Dutasteride nwere ike ịdị na ụdị ntanetị.
Mmetụta ndị kachasị emetụta nke na-eme na Dutasteride raw ntụ ntụ gụnyere:
nsogbu na-ebute ma ọ bụ na-echekwa ụlọ (nwere ike ịga n'ihu mgbe ị kwụsịrị ngwụcha Dutasteride)
mbelata na ịkwọ ụgbọala (nwere ike ịmalite mgbe ịkwụsị Dutasteride raw ntụ ntụ)
nsogbu nsogbu ejaculation (nwere ike ịga n'ihu mgbe ị kwụsịrị ngwụcha Dutachide)
abawanye ma ọ bụ obi mgbu. Ọ bụrụ na ịchọta ọkpụkpụ ara ma ọ bụ ọpụpụ nwa, gwa dọkịta gị okwu.
Ọ bụrụ na mmetụta ndị a dị nwayọọ, ha nwere ike ịlahụ n'ime ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu abụọ. Ọ bụrụ na ha na-akawanye njọ ma ọ bụ na-agaghị akwụsị, gwa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-enye ọgwụ.
mmeghachi omume nro. Ihe atụ gụnyere:
ịba ihu gị, ire, ma ọ bụ akpịrị
ọrịa prostate. Mgbaàmà nwere ike ịgụnye:
eme ka otutu onodi antigon (PSA)
otutu oge urination
nsogbu na-amalite urination
adịghị ike mmamịrị eruba
ihe mgbu na-egbu mgbu / ọkụ
ihe isi ike n'inwe ma ọ bụ na-echekwa ụlọ
ọbara na mmamịrị ma ọ bụ ọbara
ihe mgbu mgbe niile ma ọ bụ nkwesi ike na azụ, azụ, ma ọ bụ n'apata ụkwụ
Nkịtị nke Dutasteride ntụ ntụ
Raw Dutasteride ntụ ọka Marketing
Esi zụta ihe na-eme ka a ghara ịzụta ya